အလင်းမ၀င် ….. လေမ၀င်
နေမမြင် ….. လမမြင်
လူမမြင် ….. သူမမြင်မှာ
ထိုင်လျှင်ထိုင် ….. မထိုင်လျှင်ငေး
အိပ်လျှင်အိပ် ….. မအိပ်လျှင်တွေး
သတင်းမေးဖို့့ဝေးရော ….. သီချင်းလေးမှ မဆိုရ
တရားဟောဖို့ ဝေးရော ….. စကားလေးမှ မပြောရ
အဟောသိက ….. သံသရာ
အခန်းကျဉ်းကလေး ….. ပတ်လျှောက်လိုက်
သံတခါးဝ ….. ရပ်လိုက်
တမတ်တပ်တပ် ….. တနေကုန်။ ။
မနေ့ ကလည်း ….. တနေကုန်
မနက်ဖြန်လည်း ….. ကုန်အုံးမယ်
ကုန်….. ကုန်….. ကုန်….
တရက်ကုန်မလား ….. တသက်ကုန်မလား
တလကုန်မလား ….. တဘ၀ကုန် မလား
တနှစ်ကုန်မလား ….. တခေတ်ကုန်မလား
အားမလျှော့ဘူး ….. မပျော့ဘူး
ပေဖြစ်တော့ခံမယ် ..… တူုဖြစ်တော့ နှံမယ်
အမှန်တရား ….. တို့ဖက်မှာရှိတယ်
ပြည်သူအများ ….. တို့ဖက်မှာရှိတယ်
ကာလယန္တား ….. တို့ဖက်မှာရှိတယ်
ရှင်တော်ဘုရား ….. တို့ဖက်မှာရှိတယ်
တိရိစ္ဆာန်ရုံ က ကျားလို ..… လှောင်အိမ်ထဲမှာ
ကျားညွန့်တုံးမယ် ထင်နေသလား …
မှားလိုက်တဲ့အမြင် ..… ဟားတိုက်လို့ ရီချင်စရာ။ ။
အ၀ါပေါ်မှာ … အနက်စင်း…
မပျက်မယွင်း …. ကွက်ကွက်ကွင်း …
အဲဒီလိုပဲကွ….. ဟေ။ ။
[ ဦးဝင်းတင် (ဟံသာဝတီ) ထောင်ထဲတွင်ရေးဖွဲ့ခဲ့သောကဗျာ ]